Vaovao - Miandrandra ny indostrian'ny taratasy miangona amin'ny 2021
Araka ny fantatsika rehetra, amin'ny taona 2020, ny toekarena manerantany dia miatrika fanamby tsy ampoizina tampoka. Ireo fanamby ireo dia nisy fiatraikany tamin'ny asa manerantany sy ny fangatahana vokatra, ary nitondra fanamby tamin'ny fantsom-pamokarana indostrialy maro.
Mba hifehezana tsara kokoa ny fiparitahan'ny valan'aretina, orinasa maro noho izany no nakatona, ary firenena, faritra, na tanàna manerantany no voahidy. Ny areti-mandoza COVID-19 dia niteraka fikorontanana tamin'ny famatsiana sy ny fangatahana eto amin'ity tontolo misy ifandraisantsika amin'ny tany ity. Ho fanampin'izany, ny rivo-doza manan-tantara any amin'ny Ranomasimbe Atlantika dia niteraka fahatapahan'ny orinasa sy fahasahiranana miaina any Etazonia, Amerika Afovoany ary Karaiba.
Nandritra ny vanim-potoana lasa dia hitantsika fa ny mpanjifa eran'izao tontolo izao dia maniry ny hanova ny fomba fividianany entana, izay nanjary fitomboan'ny fandefasana varotra e-varotra sy ireo orinasa hafa fanompoana isam-baravarana. Ny indostrian'ny entam-barotra ho an'ny mpanjifa dia mifanaraka amin'ity fanovana ity, izay nitondra fanamby sy fotoana mety ho an'ny orinasantsika (ohatra, ny fitomboana mitohy amin'ny fonosana mihombo ampiasaina amin'ny fitaterana e-varotra). Rehefa manohy mamorona lanja ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny vokatra fonosana maharitra isika dia mila manaiky ireo fanovana ireo ary manao fanitsiana ara-potoana mba hamaly ny filàna miova.
Manana antony hijerena fanantenana momba ny 2021 isika, satria ny ambaratonga fanarenana toekarena lehibe maromaro dia amin'ny ambaratonga samihafa, ary antenaina fa hisy vaksiny mahomby kokoa eny an-tsena ao anatin'ny volana vitsivitsy, mba hifehezana kokoa ny valanaretina.
Nanomboka tamin'ny telovolana voalohany ka hatramin'ny telovolana fahatelo 2020, nitombo hatrany ny famokarana kaontenera fitaterana manerantany, miaraka amin'ny fisondrotana 4,5% tamin'ny telovolana voalohany, fiakarana 1,3% tamin'ny telovolana faharoa, ary fitomboana 2,3% tamin'ny telovolana fahatelo . Ireo tarehimarika ireo dia manamarina ny fironana tsara aseho amin'ny ankamaroan'ny firenena sy ny faritra amin'ny tapany voalohany amin'ny taona 2020. Ny fiakarana tamin'ny telovolana fahatelo dia vokatry ny famokarana taratasy voaverina, raha toa kosa ny famokarana tady virijina dia very hery nandritra ny volana fahavaratra, miaraka amin'ny fihenan'ny 1.2%.
Nandritra ireo fanamby rehetra ireo dia hitanay fa niasa mafy ny indostria iray manontolo ary nanolotra vokatra vita amin'ny baoritra mba hitazomana ny fisokafan'ny rojom-bolo tena ilaina mba hanaterana sakafo, fanafody ary kojakoja lehibe hafa.
Roller Conveyor Systems, Efijery fiasan'ny atrikasa, A3 Taratasy fampirimana, Masinina maranitra ho an'ny fonosana taratasy, Carte Conveyor, Erp Banking,